Dhacdada Apple, Apple Watch Series 7 iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican waxaan ka imid Mac | Waxaan ka imid mac
Dhacdada Apple, Apple Watch Series 7 iyo inbadan. Isbuuca ugu fiican waxaan ka imid Mac
Toddobaadkan waxaan shaki ku jirin in lagu xusuusan doono sidii toddobaadkii ay Apple billowday casuumadaha loogu talagalay soo bandhigidda moodeelka cusub ee iPhone, iPhone 13. Dhab ahaantii, toddobaadka waxaa ka buuxsamay warar xan ah oo ku saabsan taariikhda dhacdada oo ugu dambayntii si rasmi ah loo xaqiijiyay, Talaadada soo socota waxaan ballan la leenahay Apple laga bilaabo 19:00 fiidnimo.. Soy de Mac waxaan ku dabooli doonnaa munaasabadda sidii had iyo jeer shabakadda, shabakadaha bulshada iyo shirkadda Actualidad iPhone ee kanaalka YouTube.
Waqtigan xaadirka ah iyo inta maalinta munaasabaddu timaaddo waxaan ku soconnaa webka waxyaabaha ugu muhiimsan. Ma bilaabi karno annagoo aan magacaabin magaca dib -u -dhacyada suurtagalka ah ee la filayo iibinta Apple Watch Series 7 waana in wax walba ay taasi tilmaamayaan Waa inaan dulqaadannaa haddii aan qorsheyneyno inaan iibsanno mid ka mid ah saacadahaan Apple ee caqliga badan.
Wararka soo socda ayaa si cad u tilmaamaya korodhka suurtogalka ah ee qiimaha qalabka Apple (dabcan shirkadaha kale ee qaybta sidoo kale) sababta oo ah yaraanta jajabka iyo qaybaha kale. Waqtigan xaadirka ah wax walba waa xan waxaana la arki doonaa sida wararka noocan ahi u soo baxaan.
Mid kale oo ka mid ah kuwa la xiriira Apple Watch waa midka tilmaamaya in dib -u -qaabayntiisa ay u oggolaan doonto adeegsadaha ku raaxayso qaar ka mid ah xallinta shaashadda. In macnaha this waxa muhiimka ah waa in cabbirka guud uusan aad u weyneyn ee saacad iyo tan waxay u muuqataa inay tahay kiiska, ugu yaraan marka loo eego xanta.
Bandhigyada Mini-LED hore u ahaan lahayd liisaska oo ay weheliyaan 14-inji cusub iyo 16-inji MacBook Pros siday u kala horreeyaan. Waxay u muuqataa in wax walba ay qaab samaynayaan ugu dambayntiina waxaa soo baxaya war muhiim ah oo ku saabsan imaanshaha kooxahan cusub ee la filayo kahor dhammaadka 2021. Waan arki doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dhacdada Apple, Apple Watch Series 7 iyo inbadan. Isbuuca ugu fiican waxaan ka imid Mac
Kooxaha Microsoft waxay la jaan qaadi doonaan CarPlay
Ugu dambeyntiina, waxay umuuqataa in taxanaha Apple Watch 7 la heli doono bisha Sebtember.